OUR BLOG | Planet3 FILMS
Nepali Cinema Script Writing Competition को नतिजा आज सार्वजनिक
लगभग ७ महिना देखी Planet3Films को लागि New Nepali Cinema द्वारा सन्चालित Nepali Cinema Script Writing Competition को नतिजा आज सार्वजनिक भएको छ। प्रतियोगीतामा ८० वटा कथाहरु सहभागी रहेका थिए जसबाट पहिलो चरणमा हामीले १० वटा कथा छानेर ति कथाहरुलाई Script को रुपमा तयार पार्न आग्रह गरेका थियौ।
१० जना अन्तिम चरणका प्रतियोगीहरुको नाम यस् प्रकार छन:
1. Amit Aryal (Alternative Arts)
2. Bindu Devkota
3. Deepesh Mushyan
4. Neil Roun
5. Rohit Devkota
6. Sagar Bhandari
7. Sampada Malla
8. Sandep Badal
9. Saroj Gautam
10. SUshrey Nepal
Neil Roun र Deepesh Mushyan ले हामीलाई Final Script पठाउनु भएन। शायद उहाहरुका आफ्नै ब्यक्तिगत समस्याहरु होलान।
बाँकी ८ वटा Script मध्य बाट Winner हुनु भएको छ, Rohit Devkota, उहाको Script “मृताकार” लाई अब Planet3Films ले निर्माण गर्ने छ। यस्तै गरी हामीले सल्लाह गरेर Runner Up पनि घोषणा गर्दै छौ, सन्दीप बादलको “झरी” नामक Script Runner Up भएको छ। सन्दीप बादलको झरीलाई अष्ट्रेलियाको Alp Entertainment, अमेरिकाको Planet3Films र अपिल बिष्ट फिल्म्स ले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने छ।
Rohit Devkota र सन्दीप बादललाई धेरै धेरै बधाई छ।
ROHIT DEVKOTA (WINNER)
बाँकी रहेका ६ वटा Script हरुमा नेपालका थुप्रै सिनेमा मेकरहरुले चासो देखाउनु भएको छ। आशा छ यस् प्रतियोगिताका सम्पूर्ण Script हरुले सिनेमाको रुप लिने छ। सबै प्रतियोगीहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई।
हामीलाई यस् प्रतियोगिता भरी साथ दिने जुरी, मिडियाका साथीहरु, दर्सकहरु र सम्पूर्ण शुभ चिन्तकहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
New Nepali Cinema & Planet3FIlms
10 script writing competition’s finalist announced
अन्तत, हामीले १० उत्कृष्ट कथालाई छानेका छौ। ८० कथा मध्यबाट छानिनु भएका सम्पूर्ण 10 कथाकारहरुलाई मुरी मुरी बधाइ छ। सहभागी हुनु हुने सम्पूर्ण कथाकरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईंहरुको सहभागीताले हामीले अब यस् प्रतियोगितालाई अझ ब्यापाक बनाउने रे हरेक बर्ष अल्ली फरक तरिकाले गर्ने सोच सम्म बनाउदै छौ। यो प्रेरणा तपाईंहरु सबैको सहभागीताले मिलेको हो। नेपाली सिनेमाको ईतिहासमा शायदै कुनै Script Writing Competition भएको थियो होला।
अब छानिनु भएका कथाकारहरुले आफ्नो कथालाई पूर्ण सिनेमाको रुपमा रुपन्तरण गर्नको लागि स्क्रिप्ट लेखन तर्फ अघी बढ्नु हुने अनुरोध छ। हामीले पूर्ण Script submission को final submission deadline 31st July बनाउने निर्णय गरेका छौ। समयमै Script newnepalicinema@gmail.com मा पठाउनु होला।
दोस्रो चरणमा पुग्नु भएका सबै प्रतियोगितालाई सफलताको लागि शुभ कामना।
8. Sandeep Badal
यी १० वटा Script सिनेमा उध्योगका लागि बिशेष हुने छ, हामी बिभिन्न सिनेमा मेकरहरुलाई यी Script देखाएर सके सम्म सिनेमा बन्ने बातावरण बनाउने प्रयत्न गर्ने छौ।
Event manager: Mannose Adhikari
Nepali Cinema Script Writing Competition को पहिलो चरण समाप्त
New nepali cinema & planet3 films
आज बाट हाम्रो Nepali Cinema Script Writing Competition को पहिलो चरण एही समाप्त भएको छ। पहिलो चरणमा हामी कथा मात्र लिन्छौ भनेका थियौ। एती धेरै उत्साहाजनक सहभागीताका लागि सम्पूर्ण प्रतिभासाली लेखकहरुलाई मुरु मुरी धन्यबाद छ। हामीले ७५ वटा कथा ६३ + लेखकहरु बाट पाएका छौ, कुनै कुनै लेखकहरुले ४-५ वटा सम्म कथा पठाउनु भएको छ।
अब आज बाट यो प्रतियोगिताको दोस्रो चरण सुरु हुने छ, जस्का लागि केही दिन भित्र हाम्रा जुरीले १० वटा कथा छान्नु हुने छ। अनी १० वटा कथा, १० जना लेखकहरुले दोस्रो चरणको प्रतिस्प्रधामा भाग लिनु हुने छ। हामी १० वटा कथाका लेखकलाई ईमेल बाट संपर्क गर्ने छौ र १० जनाको लिस्ट यहाँ सार्वजनिक गर्ने छौ। यी १० जना प्रतियोगीले प्रतक्ष रुपमा हाम्रा जुरीसँग संपर्क गर्न पाउने छन र आबस्यक सरसल्लाहा, सहयोग लिने मिल्ने छ।
यस् प्रतियोगिताको सङ्चालनका क्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने सबै मिडियाका साथीहरु, कलाकर्मीहरुलाई सह्रिदय धन्यवाद। खुशीको कुरा केही सिनेकर्मीहरुले हामीलाई प्राप्त कथाहरुमा चासो देखाउनु भएको छ, त्यसैले एक भन्दा बढी कथामा सिनेमा बन्न सक्ने सम्भाब्यता रहेको कुरा भन्न चाहन्छौ। आगामी दिनहरुमा New Nepali Cinema को सकृयातामा यस् प्रतियोगिताको निरन्तरता र अरु पनि धेरै नेपाली सिनेमा उध्योगको बिकासमा टेवा पुग्ने कार्यहरु गर्ने प्रतिबध्धता पनि जायर गर्न चाहन्छौ।
यहाँ प्रतियोगी लेखकहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै छौ:
1.Shekhar Dhungel,2stories
2. Milan Pokharel
3. Saroj Gautam
4. Bikram Subedi
5. Nischal Timila
6. Binod Rai
7. Manoj Kumar Shrestha
9. Basanta Adhikari
10. Prakash Sharma
11. Pranav Joshi
12. Jeena KC
13. Sagar PYakurel
14. Krishna B Chhantyal
15. Tika Raj Payangu
16. Sagar Thapa
18. S. s. Sanjeev
17. Saroj Gautam
18. Buddhi Pokharel
19. Shiva Adhikari
20. Ramesh Shrestha
21. Atma Thapa
22. Shrijana Khanal
23. Sumit Maharjan
24. Laxmi Shrestha and Sumit Maharjan
25. Raju Dahal
26. Satyam Raj
27. Abhimanyu Nirabi
28. Laxmi Shrestha
29. Binod Dhami
30. Janavi Simkhada
31. Prabhat Khadka
32. Samir Sodemba
33. Mahendra Joshi
34. Dristi Gurung
35. Ashish B Singh
36. Laxmi Giri
37. Amit Aryal
38. Sunita BC
39. Prachi Dhungana
40. Sampada Malla
41. Santosh Tamang
42. Sagar Pyakurel
43. Kanali Prodcution (Kanchan gurung and Alisha gauchan)
44. Toya Chaulagain
45. Punae Gurung
46. Sushrey Nepal
47. Prabha Acharya
48. Siseer Aryal
49. Romi Moses Tandukar/Mr. Prakash Jung/ Mr. Saroj Giri
50. Umesh Pandey
51. Purna Basnet
52. Alisha Kanchan
53. Bibhusit Acharya
54. Dilli R Chapagai
55. Tarjan Chhetri
56. Gabija Spokaite
57. Yugal Tamang
58. Sagar Bhandari
59. Deepesh Mushyan
60. Gaurav Dhwaj Khadka
61. Janak Raj Bhatta
62. Saroj Basnet,Nirmal Adhikari,Nawaraj Bastakoti and Sunil Pokharel
63. Neil Roun
2014 © planet3 films. All rights reserved.